कतारमा मृत्यु : एक करोड राहत - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider खाडी बिशेष कतारमा मृत्यु : एक करोड राहत
कतारमा मृत्यु : एक करोड राहत
Slider , खाडी बिशेष
भरतपुर । कतारमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका चितवनका दुई व्यक्तिका परिवारलाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीबाट लगभग एक करोड रुपैयाँ बराबर राहत प्रदान भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडितका परिवारले रकम बुझेका छन् ।
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सुस्मिता पाठक गुरुङले ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक बुझिन् । उनका श्रीमान् चेतबहादुर पाठक वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका बेलामा विसं. २०७० सालको असारमा सडक दुर्घटनमा परेर ज्यान गुमाएका थिए । घरबाट गएको १५ दिनमै उनको निधन भएको थियो ।
त्यस्तै, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई दिनअघिमात्रै भण्डाराका बिसमति चौधरीलाई ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । उनका श्रीमान् धनेश्वर चौधरीको पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका बेलामा ज्यान गएको थियो ।
‘उहाँहरुलाई क्षतिपूर्ति र राहतस्वरुप कतारमा उहाँहरुले काम गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले नै रकम पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यालयमा आएको रकम बराबरको चेक परिवारलाई दिएका हौं’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकास सिंहले भने ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जोखिम पनि छ । तर कागजपत्र ठीक बनाएर गएमा, सम्झौता राम्रोसँग गरेमा तलमाथि भए पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने उदाहरण हो यो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले भने । सरकारबाट पाउने रकम उनीहरुले यसअघि नै पाइसकेको उनले बताए ।
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षमा तीनदेखि चार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा यस्तो रकम सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । महिनामा तीनजना परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति बापत्को रकम दिने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले जानकारी दिए ।
एक÷दुई लाख रुपैयाँदेखि कहिलेकाँही ठूलो रकम पनि क्षतिपूर्तिबापत सम्बन्धित विदेशका रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट आउने गरेको छ । ‘विदेशमा रोजगार गर्नेहरु ठूलै समस्यामा पर्ने गरेका समाचारहरु बेला बेलामा आउने गर्छन् । निधन भएमा पनि वर्षौसम्म शबसमेत परिवारले नपाउने समस्या छन् । अर्कोतर्फ राहत र क्षतिपूर्ति पनि छ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर जानुपर्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले भने ।
सरकारी नियम के छ ? यहाँबाट रोजगारीका लागि पठाउने कम्पनीले ती शर्त र नियमहरु पालना गरेका छन् वा छैनन् ? यहाँ गरेको सर्तअनुसार विदेशको रोजगार कम्पनीले काम गरेको छ वा छैन हेर्ने हो भने समस्या नहुने सिंहले बताए । अवैधानिक र अनाधिकृत रुपमा जाँदा समस्याहरु बढ्ने तर्फ सबै चनाखो र सजग रहन उनले आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विदेशी कम्पनीबाट आएको राहत रकम बुझ्दै सुस्मिता ।
source: chiton post